Fambara, fitsaboana ary fikolokoloana ny aretina Addison amin'ny alika | Tontolo alika
La Aretina Addison amin'ny alika, izay azontsika fantarina amin'ny anarana hypoadrenocorticism koa, dia ampahany amin'ny iray amin'ireo aretina izay manana tohotra lehibe amin'ny alika, na dia eo aza ny zava-misy fa ny fitsaboana tsara indrindra, ny alika izay nahazo famaritana amin'ity aretina ity dia mety manana fiainana antenaina tanteraka.
Raha hitantsika fa marary ny biby fiompintsika matetika ary ny fanafody nomenay azy dia tsy miteraka vokany, azo inoana fa voan'ny aretina Addison io, noho io antony io no hitondranay ato amin'ity lahatsoratra ity anao rehetra ny fampahalalana ilaina momba ny soritr'aretina, fitsaboana ary fikarakarana ny aretina ity.
1 Inona ny aretin'i Addison
2 Inona no mahatonga ny aretin'i Addison amin'ny alika
3 Famantarana ny aretin'i Addison
4 Diagnostika ny aretin'i Addison
5 Fitsaboana sy fikarakarana ny aretina Addison amin'ny alika
Inona ny aretin'i Addison
Aretina Addison amin'ny alika, izay manana anarana siantifika hypoadrenocorticism, aretina lehibe tokoa io izay misy fiatraikany amin'ny fihary alika iray na roa an'ny alikanay, izay ireo izay hita tsara amin'ny voany.
Izay rehetra mahatonga a fahasimban'ny fihary adrenal mety ho ny antony mahatonga ny aretin'i Addison io.
Ny alika voan'io aretina io dia tsy manana fahaizana mamokatra habetsaky ny hormonina adrénaly (fantatra kokoa amin'ny anarana hoe tsy fahampiana adrine canine) ary noho izany dia maneho zavatra manakiana ny ankamaroan'ny lafiny fiasan'ny zavamananaina. Izany dia mahatonga ny haavon'ny glucose, sodium, potasioma ary koa klôroida hita ao anaty ra tsy manana fifehezana ilaina, izay mety hiteraka tsy fahampian'ny rano ao amin'ny alikanay ary koa olana lehibe eo amin'ny taova tena ilaina an'ny sakaizantsika, izay manokana ho an'ny fo.
Inona no mahatonga ny aretin'i Addison amin'ny alika
Amin'ny ankapobeny sy saika amin'ny tranga rehetra, inona no mety hiteraka ny Aretin'i Addison amin'ny alika dia zavatra mbola tsy fantatra.
Ny mpitsabo biby dia miahiahy fa amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra misy an'io aretina io dia vokatry ny fizotran'ny autoimmune. Ny aretin'i Addison dia toy izany koa dia mety hiteraka noho ny fanimbana ny fihary adrenalNa amin'ny fivontosan'ny metastatika, amin'ny aretim-po, ny rà mandriaka, amin'ny aretina granulomatous, amin'ny adrenolytic agents, toy ny mitotane na ny fanafody sasany toy ny trilostane, izay manana ny fahaizana manakana ny enzim-adrenal.
Raha misy manakana ny fampandehanana tsara ny fihary adrenal, ny vatana dia tsy manana fahaizana mamokatra glucocorticoids ary koa mineralocorticoids, indrindra ny aldosteron sy ny kortisol. Noho izany, izany dia miteraka soritr'aretina marobe ary amin'ny tranga mafy indrindra an'ny alika mijaly amin'ny aretin'i Addison, dia maty ny olona.
Ny mpahay siansa dia tsy manana ny fahalalana marina ny inona no mety ho antony mahatonga ny aretin'i AddisonNa izany aza, ny alika rehetra na inona na inona karazany ary koa ny habeny dia manana ny fitrangan'ity aretina ity. Na izany aza, ny karazana alika sasany dia mora voan'ny aretina Addison ary ireto manaraka ireto:
Terrier Wheated Coated Wheaten Terrier
Aretin'i Addison manana ny fahaiza-manao amin'ny alika na inona na inona karazany, taona na firaisanaNa izany aza, lasa mahazatra azy io amin'ny alika tanora, vavy ary koa ireo efa antonony.
Famantarana ny aretin'i Addison
Rehefa miseho amin'ny alika ny aretin'i Addison, dia mandeha tsikelikely ary matetika dia sarotra be ny mamantatra noho ny soritr'aretina marobe izay mifandraika amin'ity aretina ity.
Amin'ny ankapobeny, ny alika voan'ny aretin'i Addison dia manana fahaizana mamorona fizarana gastroenteritis somary henjana, tsy fahazotoan-komana, fahaverezan'ny toe-batana, ary mety hiteraka adin-tsaina koa izany. Zava-dehibe tokoa ny hitahirizantsika an'izany Fambara an'ny aretina Addison amin'ny alika, satria afaka mitombo na mihena ireo.
Ny fihenan'ny famokarana aldosteron dia misy fiatraikany lehibe amin'ny vatana. Izany dia zavatra mitarika amin'ny fiovan'ny haavon'ny serum amin'ny potasioma sodium ary koa klôroida ary mety hisy fiantraikany amin'ny voa. Izany amin'ny fomba mitovy amin'izany dia mety hiteraka olana amin'ny fo sy koa amin'ny rafi-pitetezana.
Cortisol dia iray amin'ireo hormonina steroid manan-danja indrindra izay tratry ny aretin'i Addison, izay kosa mitana andraikitra lehibe indrindra amin'ny ankamaroan'ny sela ao amin'ny vatan'ny alika. Tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny famokarana glucose io, fa koa mifehy ny metabolisma, tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny tavy sy ny proteinina, mifehy ny tosidra, manentana ny fananganana sela mena, misoroka ny fivontosana ary koa manana ny fahaizana manohitra ny adin-tsaina.
Ny fihenan'ny famokarana aldosteron ary koa ny kortisol no mahatonga ny fambara mahazatra amin'ny aretin'i Addison toy ny famoizam-po, ny fahalainana, ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana na ny tsy fahatomombanana, ny fandoavana, ny fihenan-danja, ny fivalanan'ny canine, ny fivalanana mihosin-dra, ny fihenan'ny volo na ny alopecia, ny fitomboan'ny fivalanana, ny hetaheta, ny pulse malemy, ny tsy fahampian-drano, ny gadona fo tsy ara-dalàna, ny hypoglycemia, ny fanaintainan'ny kibo ary koa hyperpigmentation ny hoditra.
Diagnostika ny aretin'i Addison
Aretina Addison ary matetika ianao no voamarina rehefa misy krizy Addisonian, zavatra iray izany mitranga rehefa tonga amin'ny dingana maranitra ny aretina ary noho izany ny alika dia mampiseho soritr'aretina izay maneho fandrahonana ny ainy, toy ny fahatairana sy fianjerana.
Rehefa milamina ny krizy Addisonianina dia tsy maintsy manao fitsapana maromaro ny mpitsabo biby vao afaka fantaro ny antony nahatonga ny fianjerany ary koa mba hialana amin'ny antony hafa. Noho io antony io dia tsy maintsy atao fitsapana ra ny alikanay ary koa biolojimika feno ary amin'ny fomba mitovy mety ilana fandinihana ny mony.
Ny tsy fahampian-dra, ary koa ny tahan'ny potasioma sy urea tsy mahazatra ao amin'ny ra, ankoatry ny tahan'ny sodium, calcium, ary koa klôro ao amin'ny ra, dia soritr'aretin'ny aretin'i Addison. Ny urinalysis dia manana fahaizana maneho samirery ny ambany ny fifangaroan'ny urine ary ny mpitsabo dia afaka manome alika electrocardiogram ny alika raha misy fiovana ao am-pon'ny alika.
Ny fitsapana farany momba an'io aretina io dia ny fitsapana ny fanentanana kortikotropine, izay momba ny fifehezana ny fiasan'ny fihary adrenal amin'ny alàlan'ny fampidirana ny hormonina synthetic ACTH. Ny mpitsabo biby dia mandrefy ny fatran'ny kortisol alohan'ny sy aorian'ny fitantanana azy, izay ahafahan'izy ireo mahalala raha miasa tsara ny fihary adrenal.
Fitsaboana sy fikarakarana ny aretina Addison amin'ny alika
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany ataon'ny mpitsabo biby amin'ny fitsaboana ny aretin'i Addison amin'ny alika dia hamaha ny krizy Addison.
Mba hanaovana izany, ny alika dia tsy maintsy ampidirina hopitaly ary amin'ny lafiny iray dia tsy maintsy manaraka fitsaboana mahery vaika mba hifehezana ny soritr'aretin'ny krizy. Raha vantany vao tsy misy atahorana ny alikantsika ary afaka nilamina avy hatrany ny dokoteranao dia mety hanome anao fanafody fanoloana hormonina afaka manampy ny alikantsika amin'ny tsy fahampiana.
Amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny iray ny zava-mahadomelina ho an'ny aretin'i Addison amin'ny alika, iray izay azo tsindrona izay mineralocorticoids izay ampiharina isam-bolana ary koa iray izay steroid izay ampiharina isan'andro. Hafa noho izany ny mpitsabo dia matetika manao fitsapana ra isan-taona na isam-bolana mba hahazoana antoka fa manao ny asany marina ny fanafody.
Ny aretin'i Addison amin'ny alika dia zavatra tsy azo sitranina. Ny alikantsika dia tsy maintsy mihinana hormonina fanoloana mandritra ny taona sisa tavela amin'ny fiainany, ary azo inoana fa tena ilaina ny fanitsiana ny doka mandritra ny taona maro, indrindra rehefa mandalo fotoan-tsarotra ny alika.
Zava-dehibe tokoa ny tsy hanandramantsika manitsy ny fanafody raha tsy manatona dokotera dokotera voalohany, satria Izany dia mety hiteraka tsy fifandanjana hafa amin'ny hormonina alika.
Ny fahitana ny doka voatondro hitsaboana ny aretin'i Addison dia mitaky fotoana ary amin'ny maha-tompony dia tokony ho vonona isika mitsidika matetika ny dokotera raha ny volana voalohany amin'ny aretina kosa dia lasa, ka amin'izany fomba izany dia manana ny fahafaha-mandrefy ny haavon'ny hormonina ary koa ny electrolytes an'ny alikantsika ny veterinera.
Rehefa vita izany rehetra izany dia tsy maintsy maka ny alikantsika indray mandeha isam-bolana isika mba hametrahana a tsindrona fanoloana hormonina ary koa hahazoana antoka fa manaraka ny mason-tsivana fanampiny fitsaboana izay mety omen'ny mpitsabo aretin-tsaina ho antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fambara, fitsaboana ary fikarakarana ny aretina Addison amin'ny alika
Tantara, toetra, fikarakarana manokana ny amboa amboadia
Inona ireo alika mpanafika?